Mino Isika fa tokony ho Madio Fitondrantena - David A. Bednar
Nataon’ny Loholona David A. Bednar
Hampitombo ny fifaliantsika mandritra ny fiainana an-tany ary mahatonga ny fivoarantsika ho azo tanterahina ao anatin’ny mandrakizay ny fankatoavana ny lalàn’ny fahadiovam-pitondrantena.
Ny hafatra entiko dia mamaly fanontaniana manan-danja izay misy vokany lehibe eo amin’ny ara-panahy: Nahoana no manan-danja tokoa ny lalàn’ny fahadiovam-pitondrantena? Mivavaka aho mba hanamarina ny fahamarinan’ireo fitsipika hohamafisiko eto ny Fanahy Masina.
Ny Drafitry ny Fahasambaran’ny Ray
Ny maha zava-dehibe mandrakizay ny fahadiovam-pitondrantena dia tsy afaka ny ho takatra afa-tsy ao anatin’ny fivelaran’ny votoatin-kevitry ny drafitry ny fahasambaran’ny Raintsika any an-danitra ho an’ny zanany ihany. “Ny olombelona rehetra—ny lahy sy ny vavy—dia nohariana araka ny endrik’Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy izay zanakalahy sy zanakavavy malalan’ny ray aman-dreny any an-danitra, ary … manana toetra sy anjara araka an’Andriamanitra” (“Ny Fianakaviana: Fanambarana ho an’Izao Tontolo Izao,” Liahona, Nôv. 2010, 129). Niara-niaina tamin’Andriamanitra tamin’ny naha-zanany ara-panahy ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra talohan’ny nahatongavana tety an-tany amin’ny maha-mety maty. Ny drafitry ny Ray dia nanome fahafahana ireo zanany lahy sy vavy ara-panahy hahazo vatana, hiaina ny fiainana an-tany, ary hivoatra ho any amin’ny fisandratana faratampony.
Ny Maha zava-dehibe ny Vatana
Ny vatantsika dia manome fahafahana hahazo traikefa lalina sy mahery vaika, izay tsy afaka ny ho azo mihitsy nandritra ny fisiantsika tany amin’ny fiainana talohan’ny nahaterahana. Noho izany, ny fifandraisantsika amin’ny olona hafa, ny hery ananantsika ny hanaiky sy hanao zavatra mifanaraka amin’ny fahamarinana, ary ny fahafahatsika mankatò ireo fitsipika sy ôrdônansin’ny filazantsaran’i Jesoa Kristy dia mihamafy amin’ny alalan’ny vatantsika. Mandritra ny fiainana mety maty isika dia miaina halemem-panahy, fitiavana, hatsaram-panahy, fahasambarana, alahelo, fahadisoam-panantenana, fanaintainana, eny fa na dia ireo zava-tsarotra avy amin’ny s